Moments Neshamwari 16
Iwe unotenda mukuongorora nyeredzi seusayenzi here? Kana zvakadaro, inguva yakareba sei iyo inofungidzirwa seyakabatana nehupenyu hwevanhu nezvinodiwa?
Kana kuverenga nyeredzi kuri, saka kuongorora nyeredzi sainzi. Sezvinoratidzwa neshoko, kuverenga nyeredzi isayenzi yenyeredzi. Isu tinotenda kuti kuongorora nyeredzi ndechimwe chesaenzi chikuru, asi isu tinotenda zvakare kuti ruzhinji rwevanotaura nezvekuongorora nyeredzi, vanokandira nyeredzi kana kufanotaura zviitiko zvenguva yemberi, vanoziva zvishoma kudarika kuratidzira kwezvinhu zvinoonekwa pakuongorora nyeredzi. . Isu tinotenda zvikuru muvazivi venyeredzi uye zvishoma kwazvo muvazivi venyeredzi. Muongorori wemashura ndiye anoziva mitemo inoronga miviri yacho mudenga, mukushanda kwavo kwemukati nekunze, pesvedzero idzo dzinobva uye dzichibata pamitumbi iyi mune hukama hwadzo, uye nemirairo inotonga nekudzora masimba aya mukati mayo. hukama neumwe neumwe uye kuita kwavo pamurume.
Muongorori wemashura ndiye anoziva zvese izvi, asi munhu nyeredzi haasi iye anotaura zvaanoziva. Anoziva kuti haagone kuramba ari muongorori nyeredzi uye kurondedzera zvakaitika munguva yakapfuura kana kufananidzira uye kufanotaura zviitiko zvinouya, uye, yebasa, gamuchira mari. Muyeredzi, mupfungwa chaiyo yeshoko, anofanira kunge akaburitsa zvinhu zvepasi uye amire pamusoro penyika kuti azive nyeredzi uye zvese zvinorehwa ne "nyeredzi." Nekuti tinotenda kuti nyeredzi hadzi anozivikanwa chaizvo, kunyangwe nevateveri vesainzi sainzi sosi yemashura. Kuongorora nyeredzi kunobata nemafambiro, huwandu, kure uye bumbiro remweya remitumbi yekudenga. Nyeredzi ndeyemashiripiti kana sainzi yakavanzika yesayenzi. Isu tinotenda kuti iwo madiki madiki ehungwaru mune yatinoti matenga anoreva zvakatowanda kwatiri kupfuura izvo zvataurwa nanyanzvi kana nenyeredzi, achinyora pasi peiyo zita.
Nyeredzi dzinoenderana nehupenyu hwevanhu uye zvido zvavo zvakanyanya sekugona kwedu kukoshesa uye kuzvinzwisisa. Vachagara vakabata kufarira kwepfungwa dzemunhu.
Sei nguva yekuberekwa munyika yepanyama inokonzera kuguma kwehupenyu hwekuzvarwa ikoko?
"Nguva" yekuzvarwa yakakosha kune ramangwana reiyo, nekuti panguva iyoyo iri mumamiriro ezvinhu akaomesesa, uye zvese zvinoratidzwa zvinogashirwa zvichave nemhedzisiro. Izvo zvinozoitwa hazvigoni kunyatso tsanangurwa. Izvo zvinongedzo zviripo panguva yekuzvarwa zvinofanirwa kuve nehunhu hwakaitika pahupenyu hweramangwana nekuti nekuda kwekumberi kwekurudziro inokanganisa muviri unoziva weastral. Asati apinda munyika, muviri unoenderana nekuchengetedza kwawo pahupenyu hwepanyama hwemubereki. Iyo inogara munyika ne proxy chete. Iyo inogara munyika mukati menyika yepanyama. Haisati ifema mweya wayo wega, ndiko kutanga kwehupenyu hwayo hwekuzvimirira hwe moyo. Panguva yekuzvarwa muviri wakaparadzaniswa kubva kune mubereki wake uye hauchazofema nemubhadharo, asi unodhonza mweya wake kubva kune yavo yemubereki ego. Muviri hausati waumbwa kana kuvharirwa kubva kunze kwenyika uye zvinokanganiswa nemuviri waamai vawo; inogara munyika mumuviri wayo, isina humwe dziviriro yemuviri kana chifukidzo. Simba rese iro riripo panguva iyoyo rinozvifungira zvisina kufanira pamusoro pomuviri uchangozvarwa patsva muviri, uyo unobva wafanana nefirimu rakachena kana dhiri, akagadzirira kugamuchira zvese zvinoonekwa uye zvinopesvedzera, izvo zvinotakurwa muhupenyu, kunyange sekunge muviri wenyama takura vanga kana brand yakamisikidzwa muhupenyu hwepakutanga. Nechikonzero ichi iyo nguva yekuzvarwa yakakosha uye inozopesvedzera mushure mehupenyu hwapasi.
Iko nguva yekuberekwa inogadzirisa sei kuguma kwevanhu munyika?
Kuti nguva yekuzvarwa yapasi isarise mafungire atinotenda, asi kuti zvinogara zvichisarudza mugumo zvatisingatendi. Destiny inotemwa pakuzvarwa chete kana munhu achida kurarama chaizvo zvichienderana nekusimbisa kunogamuchirwa panguva yekuzvarwa. Panguva yekuzvarwa iyo astral muviri wemucheche wakaita seyakagadziriswa nemifananidzo yakarongedzwa. Pakarepo zvinoratidzwa kune zvepanyama nyika masimba akasimba anoiswa pamusoro payo. Iko kufema kwekutanga kwemucheche kunoreketa zvinokanganiswa uye zvinoratidzwa pamuviri wakanyatsonzwa, uye izvi zvinoratidzwa zvinonamatira pamutumbi we astral we mucheche achangozvarwa nenzira imwecheteyo sekufungidzira kunogamuchirwa uye nekuchengetwa pasofa yemifananidzo. Kurarama zvinoenderana nekwavo kuenda kune imwe saka ndiko kutevedzera mazano anoratidzwa uye nekurarama zvichienderana nekufungidzira kwakagamuchirwa panguva yekuzvarwa. Izvi zvinongedzo zvinogadzirwa nekusimudzirwa kwemuviri uye kushandiswa kwepfungwa. Izvi zvinongedzo zvinomira kumberi uye zvichikanda mifananidzo yazvo mundangariro uye pfungwa ine tarisiro yadzo yakapihwa kwadziri nemifananidzo iyi. Iyo, iyo pfungwa, inogona kuita zvinoenderana neyakafungidzirwa uye mazano anouya kubva kune zvakafungidzirwa kana inogona kupeta nzira yakatosiyana neyekufungidzira kwakagamuchirwa. Izvi zvese zvinoenderana nepfungwa kana ego, kuti yakasimba here uye anoda kuita basa risati riri iro rinokurudzirwa nehunyanzvi hwechisimba.
Izvozvo zvinokanganisa sei pakuberekwa, kana kuti zvichaitika kune munhu, zvinoshanda pamwe ne karma ye ego?
Karma ndiyo mhedzisiro yeizvo munhu akafunga nekuita; izvo munhu zvaakafunga nekuita ndizvo zvaakarongerwa, asi chiitiko uye izvo zvinoguma zvinoshanda kune imwe nguva. Nguva iripano yakataurwa hupenyu. Zvinoitika, saka, kwenguva, ndeya karma yenguva; nguva ino hupenyu hwemuviri wakabarwa munyika. Mifungo yemumwe uye zviito muhupenyu humwe zvinokonzera uye zvinounza mamiriro ehupenyu hunotevera hunotevera hupenyu; zvinopesvedzera zviripo pakuzvarwa zviratidzo zve izvo zvaakaita kare uye nezvaangatarisira mune zvazvino. Iko kunguva yekuzvarwa, saka, inofanirwa kuwirirana uye kushandira pamwe nekarma yehupenyu ihwohwo, nekuti iyo karma, kana mhedzisiro yezviito.
Ko masimba epasi pano anoshandirwa kupa vanhu karma, kana fumo. Kana zvirizvo, kusununguka kunopinda kupi?
Ehe, masimba emapuraneti uye zvimwe zvinopesvedzera zvese zvinoshandiswa mukuita uye mukutarisira ramangwana. Asi mafambiro emurume ndizvo zvaakapa ivo pachavo. Ndeupi mafambiro ake azvino angave asingagamuchiriki kwaari; zvakadaro akapa uye anofanira kuzvigamuchira. Zvinogona kutaurwa kuti murume haazopa chinhu chaakange asingade uye, nekudaro, kuti aisazopa iro ramangwana raasina kushuvira. Kupokana kwakadaro kunoonekwa kwenguva pfupi. Izvo izvo zvinosarudzwa nemurume uye zvinopa iye kana vamwe zvakafanira zvichienderana nekukwanisa kwake kusarudza uye nenzira yake yekupa. Jaya risingazivi rine zvakawanda, kana murume mukuru ane mari shoma, mumwe nemumwe aigona kusarudza uye nekupa zvakasiyana, sekuziva kwake uye nezvavanokwanisa. Izvo izvo zvinosarudzwa uye zvinosiyirwa kure semukomana wekwavo zvinogona kunge zvisiri zvachose kukosheswa mumakore anozotevera, nekuti mukomana ave akura nezera mukuziva uye mukutenda kwake zvinhu, uye chidhanzi chemwana kana trinket inowana kutarisisa kwekushomeka semhedzisiro. Mumwe munhu akashandisa mutongo kushoma mukuita chibvumirano, zvakadaro akasungirwa muchibvumirano chake, zvisinei hazvo, kuzvidemba kwake kungave kuri pakudzidza chibvumirano. Anogona kuratidzira, asi kuratidzira hakugone kumubvisa pachisungo. .
Ingave muzvino kana muhupenyu hwapfuura munhu akabvumirana pane chaanoti mugumo wake. Iyi ndiyo yake karma, kana chibvumirano chaakaita. Zvakangori. Yemunhu rusununguko rwekuzvisarudzira haibvi pane chaanoda kuita, kana kushuva kuwana, asi pane chaanosarudza kuita. Murume akatendeseka haashandise simba rake pakuronga nzira yekutyora chibvumirano kana kuzvidzikisira pamabasa ake. Iye murume akatendeseka anozvibatisa nenzira yekuzadza chibvumirano chake uye nekuita mabasa ake. Panguva imwecheteyo, kana chibvumirano kana mabasa achionekwa naye seasingadikanwi haazoiti imwe chibvumirano chakadaro, uye haazozvimanikidza kuita mabasa. Chibvumirano chakadai uye mabasa ndeechando kana karma, icho munhu akazvigadzirira.
Yake rusununguko rwekusununguka runouya kana iye achinge afunga maitirwo aachaita nechaakakunda kana karma. Achaedza kuutiza, kana kuti achasangana nekushanda kuburikidza nawo? Apa ndipo pane rusununguko rwake rwekusarudza. Sezvaanoita nokusarudza, saizvozvo achazotarisisa mafungire ake omunguva yemberi uye anosungirwa kune izvo iye sezvaanosungirwa kune iyezvino.